निमावि तहः इन्ट्री सकियो, कहिले सार्वजनिक हुन्छ नतिजा? – Everest Dainik – News from Nepal
निमावि तहः इन्ट्री सकियो, कहिले सार्वजनिक हुन्छ नतिजा?
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले केहि दिनमै खुला तर्फको निम्न माध्यमिक तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । हाल जिल्लाबाट आएका व्यक्तिगत फाइलहरुको इन्ट्री सकेर रुजु गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । रुजुको काम सकिएलगत्तै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
‘जिल्लाबाट आएका फाइलहरु इन्ट्री सकेर रुजुपनि सकिने चरणमा छ । केही दिनमै नतिजा सार्वजनिक हुन्छ ।’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले भने, ‘यसै हप्ताभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ ।’
यसैगरी, गणित विषयमा २५० पदमा भएको विज्ञापनमा ५ हजार ४६२ परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण २८६ जनाले अन्तर्वातामा सहभागीता जनाएका थिए । यस्तै, विज्ञान विषयमा १८० पदमा भएको विज्ञापनमा १ हजार ८१२ ले परीक्षामा सहभागिता जनाएकामा २६१ उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्तामा सहभागिता जनाएका आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. थपलियाले जानकारी दिए ।
डा. थपलियाका अनुसार २७७ पदमा भएको सामाजिक विषयको परीक्षामा १७ हजार ७८४ ले परीक्षा दिई देशभरबाट उत्तीर्ण ४१० जनाले अन्तर्वार्तामा सहभागिता जनाएका थिए । एजुकेशन पाटीबाट साभार